Soo dejisan Balabolka 2.11.0.600 – Vessoft
Soo dejisan Balabolka
Balabolka – software ah in la akhriyo qoraalka xereeyo aad ugaga. Software ayaa awood u ah in la isticmaalo synthesizer hadalka nidaamka si ay Radidiyaha qoraalka galay iyo badbaadin natiijada ee file maqal ah. Balabolka taageertaa vocalization qoraalka inta ay socoto ah makiinada, muddo aad u hubiso, bandhigay qoraalka ka bogagga clipboard iyo HTML, isbedel ah iwm software font The kuu ogolaanayaa inaad si ay u doortaan timbre ama mugga codka iyo reserved xawaaraha reading. Sidoo kale Balabolka awood u tirtirto hyphen ka qoraalka dhamaadka khadadka oo bixiya loo maqli karo oo tayo leh oo aan cillado lagu jiro Akhri qoraalka.
Akhriska qoraalka aad ugaga
Settings ee xawaaraha reading
Badbaadiya oo vocalization qoraalka ee file maqal ah
Comments on Balabolka:
Balabolka Software la xiriira:
Akhristayaasha E-buugga Software inay akhriyaan e-buugaagta ka adeega Amazon. Sidoo kale software si toos ah synchronizes oo dhan goobaha u dhaxeeya e-buugaagta iyo computer.
العربية, English, Українська, Français... FBReader 0.12.10
Akhristayaasha E-buugga Software ayaa loo akhriyo eBooks qaabab kala duwan. Milicsiga The cad ee miisaska, images, garaafyo iyo qoraalada waxaa lagu taageeray in qoraalka.
العربية, English, Українська, Français... Proteus 8.5
English, Українська, Deutsch, Português... QQ 2.11 International iyo 6.4.12593 Standard